पाँचौँ राष्ट्रिय योग दिवसको तयारी पूरा, बुधबारदेखि साताभर मनाइने – Health Post Nepal
२०७६ पुष २८ गते १०:३४
सरकारले पाँचौँ राष्ट्रिय योग दिवस साताव्यापी रूपमा मनाउने तयारी पूरा गरेको छ । ‘राष्ट्रिय एकता, योगको सान्दर्भिकता’ मूल नारा तय गरी १ माघदेखि एक सातासम्म ‘राष्ट्रिय योग दिवस २०७६’ मनाउन लागिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले आइतबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।
स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त रहनका लागि योग अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ । पछिल्लो समय अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव चुलिँदो छ । पूर्वीय दर्शनद्वारा व्यवस्थित तथा ऋषि–महर्षिद्वारा सिद्ध योगको बहुआयामिक महत्त्वबोध गर्दै पछिल्लो समय विश्वभरि नै योग दिवस मनाउन थालिएको छ । पूर्वीय दर्शनबाट प्रतिपादित योगलाई पछिल्लो समय पश्चिमा मुलुकहरूले पनि अंगीकार गरिरहेका छन् । आध्यात्मिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिने योगलाई पछिल्लो समय मेडिकल साइन्सको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारमा समेत उपयोगी मानिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले योग शरीर, मन र आत्मालाई एक गर्ने आध्यात्मिक प्रक्रिया भएकाले मानवका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘बदलिँदो जीवनशैली र खानपानका कारण मानिसमा नसर्ने रोगको भार थपिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘शरीरमा भएको विकार फाल्नका लागि योगको आवश्यकता पर्छ ।’
सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक परिवारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिमा मानसिक रोग देखापर्ने चुनौती रहेको बताउँदै महानिर्देशक उपाध्यायले त्यसको नियन्त्रणको प्रमुख पाटो योग रहेको बताए । नियमित योगाभ्यासबाटै मानसिक रोगलगायत नसर्ने रोगबाट बच्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘योग, प्राणायाम, आयुर्वेद र जडीबुटीको विकास गरी हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई स्वस्थ, समुन्नत र समृद्ध बनाउने अभियानका साथ राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन लागिएको छ,’ डा. उपाध्यायले भने । मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ साउनमा प्रतिवर्ष माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
योग सप्ताहका लागि ३ लाख विनियोजन
१ देखि ७ माघसम्म मनाइने योग सप्ताहका लागि विभागले ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । योग सप्ताहमा योगबारे जनचेतनादेखि विभागका कर्मचारीलाई योगाभ्यासमा समावेश गराउनेसम्मका कार्यक्रम विभागले तय गरेको छ ।
योग गर्दा आफ्नो शारीरिक अवस्थामा ध्यान दिनु जरुरी छ । जोकसैले योग गर्दा सुरुमा आयुर्वेद चिकित्सक वा प्रशिक्षकसँग सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । शारीरिक रूपमा अशक्त, गर्भवती, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जोर्नीको दुखाइजस्ता दीर्घरोग भएकाले योग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता मानिसले धेरै परिश्रम पर्ने तथा शरीर तात्नेखालका योगाभ्यास गर्नुहँदैन । यसले मुटुमा प्रेसर पर्न जान्छ ।
तनाव लिएर योग गर्नुहुँदैन, किनभने तनावपूर्ण अवस्थामा योगाभ्यास गर्दा मांसपेशी दुख्ने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या देखापर्न सक्छन् ।
– नियमपूर्वक गरिने योगले– विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याको दीर्घकालीन निराकरण र शरीरमा सन्तुलन हुने गर्छ ।
– शरीरमा रक्तसञ्चारका साथै अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ । शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
– योगासन र ध्यानले जोर्नीको समस्या कम गर्छ, तनाव हटाउँछ, राम्रो निद्रा लाग्छ र पाचन प्रक्रिया ठिक हुन्छ ।
– स–साना बालबालिकालाई योग गराउँदा उनीहरूको दिमाग तीक्ष्ण हुन्छ भने शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन्छन् ।
– नियमित योगाभ्यासबाट कार्यक्षमतामा वृद्धि तथा शान्ति प्राप्त हुन्छ । प्राणायाम गर्दा श्वासप्रश्वासको गति नियन्त्रण हुन्छ ।
– ध्यानले एकाग्रता बढाउँछ, तनाव कम गराउँछ, सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ र अनावश्यक विचारबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
– शरीर, मन र आत्माबीचको समन्वय, ऊर्जा प्राप्ति, आत्मज्ञानलगायत सकारात्मक गुणको विकास हुन्छ ।
Tags: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, राष्ट्रिय योग दिवस